Interpol, Mutemo Wepasi Pose Wemhosva, Kuwedzererwa uye Zvimwe: Zano kubva kuCriminal Defence Gweta
Interpol, Mutemo Wepasi Pose Wemhosva, Kuwedzeredzwa uye Zvimwe
Zano kubva kuCriminal Defense Gweta muUAE
Yemarudzi Matsotsi Mutemo UAE
Kupomedzerwa mhosva hachisi chiitiko chinonakidza. Uye zvinotonyanya kuomarara kana mhosva iyi ichinzi yakaitwa pamiganhu yenyika. Mumamiriro ezvinhu akadaro, iwe unoda gweta rinonzwisisa uye rine ruzivo mukubata nekusarudzika kwekuferefetwa kwematsotsi nemachuchisi.
KuAmal Khamis Advocates, takawana mhedzisiro yakabudirira mumatare epasi rose ekudzivirira mhosva. Magweta edu ekudzivirira mhosva vane ruzivo uye ruzivo rwekugadzirisa nyaya dzine chekuita nekudzivirira kwematsotsi.
Muchikamu chino, tichaongorora mutemo wepasi rose wematsotsi uye nei uchida gweta rinoziva tambo.
Chii chinonzi Interpol?
Sangano reInternational Criminal Police Organisation (Interpol) isangano repakati pehurumende. Pamutemo yakavambwa mu1923, parizvino ine nyika makumi mana nenomwe. Chinangwa chayo chikuru ndechekushanda seplatform iyo mapurisa kubva kumativi ese epasi anogona kubatana kurwisa mhosva uye kuita kuti nyika ive yakachengeteka.
Iyo Interpol inobatanidza uye inobatanidza network yemapurisa uye nyanzvi pamatsotsi kubva kumativi ese epasi. Hofisi yemahofisi inozivikanwa seGeneral Secretariat iri muLyon, France.
Mune yega yega yenhengo dzayo, kune INTERPOL National Central Bureaus (NCBs). Aya mahofisi anoshandiswa nemapurisa emunyika.
Interpol inobatsira mukuferefeta uye nekuongorora data rekuongorora mhosva, pamwe nekutevera vapoteri vemutemo. Ivo vane epakati dhatabhesi ane yakazara ruzivo nezve matsotsi ayo anowanikwa mune chaiyo-nguva. Kazhinji, iri sangano rinotsigira nyika mukurwira kwavo mhosva.
Idzo nzvimbo huru dzekutarisisa imhosva yepamhepo, mhosva dzakarongeka, uye hugandanga. Uye sezvo mhosva iri kugara ichichinja, sangano rinoyedzawo kuwedzera dzimwe nzira dzekuteedzera matsotsi.
Ichi chiziviso chikumbiro nevamiriri vemitemo yenyika, vachikumbira rubatsiro kubva kune dzimwe nyika kugadzirisa mhosva kana kubata tsotsi. Pasina chiziviso ichi, hazvigoneke kuteedzera matsotsi kubva kune imwe nyika kuenda kune inotevera. Chiziviso chinosanganisira kugovana ruzivo uye kushandiswa kwevashandi; zvese zvinodiwa kuti basa riitwe.
Kune angangoita manomwe marudzi eInterpol ziviso inosanganisira:
Orenji: Kana munhu kana chiitiko chikakanganisa kuchengetedzeka kweruzhinji, iyo nyika inogamuchira inopa chiziviso cheorenji. Vanopawo chero ruzivo rwavanarwo pachiitiko kana pamusori. Uye ibasa renyika iyoyo kuyambira Interpol kuti chiitiko chakadai chingangoitika zvichienderana neruzivo rwavanarwo.
Bhuruu: Ichi chiziviso chinoshandiswa kutsvaga munhu anofungidzirwa asingazivikanwe kuti aripi. Dzimwe nhengo dziri muInterpol dzinoongorora kusvikira munhu awanikwa uye nyika iri kuziviswa. Kuwedzeredzwa kunogona kuitika.
Yera: Zvakafanana nechiziviso chebhuruu, yero yero inoshandiswa kutsvaga vanhu vasipo. Nekudaro, zvakasiyana nesaziso yebhuruu, izvi hazvisi zvevapomeri vematsotsi asi zvevanhu, kazhinji vana vasingakwanise kuwanikwa. Izvo zvakare ndeye vanhu vasingakwanise kuzvizivisa pachavo nekuda kwechirwere chepfungwa.
Network: Chiziviso chitsvuku chinoreva kuti paive nemhosva huru yakaparwa uye uyo anofungidzirwa itsotsi rine njodzi. Inoraira kuti ndeipi nyika inofungidzirwa kuti iriko kuti ichengete munhu iyeye uye kuteedzera nekusunga munhu anenge afungirwa kudzamara kudzoserwa kwaitwa.
Girinhi: Ichi chiziviso chakafanana chaizvo nechitsvuku chiziviso chine zvakafanana zvinyorwa uye kugadzirisa. Musiyano mukuru ndewekuti green ziviso ndeyemhosva diki dzakanyanya.
Dema: Chiziviso chevatema ndechezvitunha zvisina kuzivikanwa izvo zvisiri vagari venyika. Chiziviso chinopihwa kuitira kuti chero nyika inotsvaga izive kuti mutumbi uri munyika iyoyo.
Vana Ziviso: Kana paine mwana kana vana vasipo, nyika inopa chiziviso kuburikidza neInterpol kuitira kuti dzimwe nyika dzibatanidze mukutsvaga.
Chiziviso chitsvuku ndicho chakanyanya kuomarara pane zvese zviziviso uye kuburitswa zvinogona kukonzera mhedzisiro pakati pemarudzi epasi. Zvinotaridza kuti munhu wacho tyisidziro kune runyararo rweveruzhinji uye anofanira kutarisirwa saizvozvo. Icho chinangwa cheye red chiziviso kazhinji kusungwa uye kuwedzerwa. Panguva ino, mubvunzo wakanaka kubvunza ungave, chii chinonzi extradition?
Chii chinonzi Kuwedzeredza?
Pasi pemutemo wepasi rese, kudzosera kunze kwenyika inzira iyo imwe nyika inoendesa munhu kuenda kune imwe nyika kunotongwa kana kurangwa pamhosva dzakaitwa munyika yekupedzisira.
Izvi zvinowanzoitika kana munhu akapara mhosva mudunhu rekukumbira asi akatizira kunzvimbo yekutambira.
Pfungwa yekudzoserwa munyika yakasiyana nekudzinga munyika, kudzinga, kana kudzinga. Zvese izvi zvinongedzera kubviswa zvine simba kwevanhu asi pasi pemamiriro akasiyana.
Vanhu vanogadziriswa vanosanganisira:
avo vakapomerwa mhosva asi vasati vatongwa,
avo vakatongwa vasipo, uye
Vaya vakaedzwa nekutongwa asi vakapona mutirongo.
Mutemo weUAE wekudzora unotongwa neMutemo Federal No. 39 we2006 (Extradition Mutemo) pamwe nezvibvumirano zvekudzora zvakasainwa nekusimbiswa nazvo. Uye kana pasina chibvumirano chekudzosera kunze kwenyika, vatevedzi vemitemo vanozoshandisa mitemo yemuno vachiremekedza chirevo chekudzokorora mumutemo wepasi rose.
Kuti iyo UAE itevere chikumbiro chekuwedzeredzwa kubva kune imwe nyika, nyika inokumbira inofanira kusangana nemamiriro anotevera:
Mhosva inova nyaya yekukumbira kudzoserwa inofanirwa kurangwa pasi pemitemo yenyika iri kukumbira uye chirango chinofanirwa kuve icho chinotadzisa rusununguko rwemutadzi kwegore rimwe chete.
Kana iyo nyaya yekuwedzeredzwa ichienderana nekuitwa kwechirango chekuchengetwa, chirango chasara chisina kuongororwa hachifanirwe kunge chiri pasi pemwedzi mitanhatu
Kunyange zvakadaro, iyo UAE inogona kuramba kuendesa munhu kana:
Iye munhu arikubvunzwa iUAE nyika
Mhosva yakakosha imhosva yezvematongerwo enyika kana inoenderana neyematongerwo enyika
Mhosva iyi ine chekuita nekutyorwa kwemabasa echiuto
Chinangwa chekudzoserwa kuranga munhu nekuda kwechitendero chake, dzinza, nyika, kana maonero ezvematongerwo enyika
Iye munhu arikubvunzwa akaitirwa kana anogona kuitirwa utsinye, kushungurudzwa, kuitirwa hutsinye, kana kurangwa kunonyadzisa, munyika inokumbira, iyo isingaenderane nemhosva.
Munhu wacho akatoferefetwa kana kutongerwa mhosva imwecheteyo uye akasunungurwa kana kutongwa uye akambopa chirango chakakodzera
Iwo matare eUAE akaburitsa mutongo wakasarudzika maererano nemhosva inova nyaya yekuwedzeredzwa
Bata weInternational Criminal Defense Gweta muAFA
Haasi ese gweta redziviriro ematsotsi muUAE ane ruzivo rwakakosha uye ruzivo rwekugadzirisa nyaya dzenyika dzese. Mhosva dzakadai dzinowanzo sanganisira kutaurirana nehurumende yemubatanidzwa, pamwe nehurumende dzekunze mune zviitiko zvekuwedzeredzwa.
Zvakare, iyo mitemo ine chekuita nekudzoserwa kunze kwenyika, Mutual Legal Assistance Treaties, matsotsi mvumo, uye nezvimwe zvine hukama munyika dzakawanda dzakaoma. Saka nekudaro, zvakakosha kuti iwe uve negweta rine nhoroondo yekuratidzira mukubata nyaya dzenyika dzekupara mhosva.
Magweta edu ku Amal Khamis Vatsigiri vane ruzivo uye vane hunyanzvi pakurwisa nyika dzekunze zvinhu kuchengetedza vatengi vedu. Neruzivo rwedu, ramangwana rako rakachengetedzwa sezvo isu tichava nechokwadi chekuti nyaya yacho iri mukufarira. Isu tiri nyanzvi kwazvo yeCriminal Law Firm, inoshanda muCriminal Defense Law uye nezvimwe zvine hukama. Bata nesu nhasi kune chero kuwedzerwa, Interpol zviziviso kana epasi rose mutemo mhosva.